Fitaovam-pitaterana - Wikipedia
Ny fitaterana (matetika ampiasain'ny UK), na ny fitaterana (ampiasaina any Etazonia), no fomba mora indrindra fivezivezen'ny olona, ​​ny biby ary ny entana avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny hetsika fitaterana dia faritana ho toy ny fihetsiky ny zavamananaina manokana na zavatra iray avy amin'ny teboka A (toerana iray eny amin'ny habakabaka) mankany amin'ny teboka B. Ny lalam-pitaterana dia misy ny rivotra, tany (lalamby sy lalana), rano, tariby , fantsona sy habaka. Ny saha dia azo zaraina amin'ny fotodrafitrasa, ny fiara ary ny asa. Ny fitaterana dia mamela ny varotra eo amin'ny olona, ​​izay tena ilaina amin'ny fampandrosoana ny sivilizasiôna.
Ny fotodrafitrasa fitaterana dia misy ny fametrahana raikitra, ao anatin'izany ny làlana, lalamby, làlambe, làlambe, lakandrano sy fantsom-pitaterana sy fantsona toa ny seranam-piaramanidina, gara, gara, trano fitobiana, tobim-pitaterana kamiao, fitoeran-tsolika (anisan'izany ny dabilio sy tobin-tsolika) ary seranan-tsambo. Ny terminal dia azo ampiasaina amin'ny fifanakalozana mpandeha sy ny entana ary ho fikojakojana.
Ireo fiara mandeha amin'ireto tambajotra ireto dia mety ahitana fiara, bisikileta, bisy, lamasinina, kamio, angidimby, fiaramanidina, sambon-danitra ary fiaramanidina.
Ny fiasa dia mifandraika amin'ny fomba fiasan'ny fiara, sy ny lamina napetraka ho an'ity tanjona ity, ao anatin'izany ny famatsiam-bola, ny ara-dalàna ary ny politika. Amin'ny indostrian'ny fitaterana, ny asa sy ny fananana fotodrafitrasa dia mety ho an'ny daholobe na tsy miankina, miankina amin'ny firenena sy ny fomba.
Ny fitaterana mpandeha dia mety ho an'ny daholobe, izay misy serivisy manome serivisy voalamina, na tsy miankina. Ny fifamoivoizana entana dia nanjary nifantoka tamin'ny fananganana container, na dia fitaterana betsaka aza dia ampiasaina amin'ny entana maharitra maharitra. Ny fitaterana dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fitomboana ara-toekarena sy ny fanatontoloana, fa ny ankamaroan'ny karazany kosa dia mahatonga ny fahalotoan'ny rivotra ary mampiasa tany marobe. Na dia omen'ny governemanta fanampiana be dia be aza izy io, ny drafitra fitaterana tsara dia tena ilaina mba hampivezivezy ny fifamoivoizana sy hanakanana ny fitobaky ny tanàna.
Ny Firenena Mikambana voalohany dia nanaiky tamin'ny fomba ofisialy ny anjara andraikitry ny fitaterana amin'ny fampandrosoana maharitra amin'ny fihaonamben'ny Firenena Mikambana tamin'ny 1992. Tamin'ny fihaonambe eran-tany an'ny Firenena Mikambana 2012, niray feo ireo mpitarika eran'izao tontolo izao fa ny fitaterana sy ny fivezivezena dia ivon'ny fanatanterahana ireo tanjona kendrena haharitra. Tao anatin'izay taona lasa izay, nangonina ny angona mba hanehoana fa ny sehatry ny fitaterana dia mandray anjara amin'ny ampahefatry ny fandefasana entona entona manerantany ary noho izany, ny fitaterana maharitra dia nanjary ampitaina amin'ny tanjona amin'ny fampandrosoana maharitra 2030, indrindra ireo mifandraika amin'ny sakafo, fiarovana, fahasalamana , angovo, fitomboan'ny harinkarena, fotodrafitrasa ary tanàna sy toeram-ponenan'olombelona. Ny fihaonana amin'ny tanjona kendren'ny fitaterana maharitra dia voalaza fa manan-danja indrindra amin'ny fanatanterahana ny fifanarahana tany Paris.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitaovam-pitaterana&oldid=999454"
Voaova farany tamin'ny 30 Desambra 2020 amin'ny 10:18 ity pejy ity.